Everestmission | हरपल खबर, निष्पक्ष विश्लेषण खोई कहाँ छ राष्ट्रियताको भाव ? जो मानिसमा कालो कुरुप रहेको छ
त्रिविद्वारा परीक्षा फारम भर्ने सम्बन्धी सूचना (सुचनासहित)
नायिका आँचल र उदिपले गरे इन्गेजमेन्ट
खोई कहाँ छ राष्ट्रियताको भाव ? जो मानिसमा कालो कुरुप रहेको छ
१६ फाल्गुन २०७५, बिहीबार १८:०८
म नेपाली नागरिक भएको हैसियतले कुनै राजनीतिक दललाई समर्थन गर्छु होला, यो मेरो नैसर्गिक अधिकार हो । लोकतान्त्रीक गणतन्त्रमा बोल्न र लेख्न स्वतन्त्रता रहको हुन्छ । लोकतन्त्र भनेको खुल्ला आकाश हो, जहाँ सवैलाई समान न्यायको प्रत्यभूति रहेको हुन्छ । लोकतन्त्रमा कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा हुँदैन । कुनै पनि मानिसका राजीतिक आस्था फरक फरक हुन सक्छ, विश्वास पनि फरक हुन सक्छ यो स्वभाविक प्रकृया हो । तर सवै नागरिकता प्राप्त गर्ने नागरिक देशको समृद्धि र सुशासन स्थापनाका हिस्सेदार हुन । सवैको आ–आफ्नो ठाउँबाट सवैको आफ्नै प्रकारको भूमिका रहेको हुन्छ । देश रोएको बेला मजाक उडाउने र खुसी मनाउनेलाई नेपाली नागरिक हो वा हैन ? भन्ने प्रश्न चिन्ह खडा भएको देखिन्छ ।
मान्छे बाँचेपछि अनेकौं देख्न र सुन्न पाइदोरहेछ । देशमात्र होईन विश्व आज रोइरहेको छ, दुःखमा छड्पटीरहेको छ, भौतिरिएकोछ कि एक राष्ट्र र राष्ट्रियताको खम्वाको रुपमा रहेका, युवाको आसा र भरोसाका केन्द्रविन्दुको वा दियोको रुपमा रहेका संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीसहित देशका होनोहार ७ व्यक्तित्वको दुःखद् निधनले देश रोएको छ, राष्ट्रप्रेमी व्यक्ति भावविह्रल भएका छन्, आँशु थामिएका छैनन्, शाँशुले देशको माटो भिजेको छ जसमा राष्ट्र र राष्ट्रियताको माया र ममता रहेको छ ।
अर्को तर्फ केही राष्ट्र विरोधि, राष्ट्रघाती, राष्ट्रका दुसित, पृथ्वीका भारीका रुपमा रहेका व्यक्तिले देश आँशुले डुवेको समयमा मजाक उडाउने र खुसी मान्नेले भावनात्मक रुपमा विजय जुलुस नै मनाइरहेका छन्, जुन सामाजिक सञ्जालमा ।
सरकारले सूचना प्रविधि ऐन ल्याएको छ जसमा सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गर्ने व्यक्तिलाई तीन वर्ष जेल तथा पाँच लाखसम्म जरिवाना गर्ने प्रवाधान त ल्याएको छ । जसलाई कार्यान्वयन ल्याउन यही दुःखद् घटनालाई मजाक र राष्ट्र विरोधी गतिविधि गर्नेलाई कानुनी कठाघरमा ल्याउनु वर्तमान समयको अपरिहार्यता रहेको छ । यस्ता दुसित पृथ्वीका भारीलाई अहिले आएको सूचना प्रविधि ऐनले तीन वर्ष कैद र पाँच लाख जरिवानामात्र होइन कि रत्नपार्कको खुल्ला मैदानमा लगि झुण्ड्याएर तड्पाई तड्पाई मृत्युदण्ड दिनु अपरिहार्य जस्तै भएको छ ।
हिजो र आजको परिस्थितीलाई हेर्ने हो भने देशमा एक प्रकारको निरंकुशता नै आवश्यक जस्तै भएको देखन्छ । देखिएको केही स्वार्थ तथा मानसिक रुपमा क्षमताको कमजोरी भएकाले राष्ट्रिय व्यक्तिको दुःखद् निधनमा विजयी जुलुस लगाइरहेका छन् । तिनिहरुको घरमा पनि ता आमा बुवा तथा घर परिवार होला नी ? कुनै दिन आफुलाई त्यस्तो दुःखद् घटना भएमा आफुलाई कस्तो पिडा हुन्छ ? कहिलै सोचेको छ ?
हुन त सोच्न दिमाग नै पुग्नु पर्यो नि त्यो परिस्थिती आफुमा आए कस्तो हुन्छ भनि ! जानेका छन् मात्र आफ्नो दिमागमा नै विरोधको कालो रुप । तर त्यो विरोधका कालो रुप कति समय टिक्छ र आफुलाई कति असर पर्छ भन्ने बुझ्न जरुरी हुन्छ ।
भ्रमको खेती नगरौं, राष्ट्रियताको सवालमा कसैले पढाउनु पर्दैन : सांसद बस्नेत
बलात्कार गरेको आरोपमा पूर्वअसई प्रकाउ
काठमाडौँ, १२ फागुन । आज सोमबार पनि सुनचाँदीको मूल्य बढेको छ । आज सुन तोलामा १५ सय रुपैयाँले बढेर छापावाला
बैंक अफ काठमाण्डूमा २५ रुपियाँमा खाता खोल्न पाइने
काठमाडौँ, १२ फागुन । बैंक अफ काठमाण्डू लिमिटेडले आफ्नो २५औँ वर्ष पूरा गरेको उपलक्ष्यमा ग्राहकको उच्चतम् लाभलाई मध्यनजर गरेर ‘बीओके’
काठमाडौँ, १२ फागुन । नेपालको सेयर बजार इतिहासमै नयाँ रेकर्ड कायम गर्दै आइतबार साढे तीन अर्ब रुपियाँभन्दा बढीको कारोबार भएको
काठमाडौँ, १२ फागुन । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज सोमबार तोकेको विनिमय दर अनुसार यस प्रकार रहेको छ ।